Wednesday July 12, 2017 - 19:49:40 in Maqaallo by XA_Wararka Caynaba News
26-june 1960-kii Calan saarkii British Somaliland 1-july 1960-kii calan saarkii Italian Somaliland. 27-june 1977-kii calan saarkii French Somaliland
Gumaysi nacayb ay bulshada Soomaalidu ka sinayd iyo jacayl loo qabay in la dhiso dowlad soomaaliyeed oo ka kooban shantii waaxood ee gumaystuhu soomaali u kala qaybiyay ayaa xiligaa ahayd si wayn u dhex qaaday geeska Africa. bulshada Soomaaliduna waxa ay ku hadaaqi jirtay erayo lagu wiirsanayo cidii ka hortimaad in la mideeyo shanta Soomaaliyeed, weedhaha lagu hadaaqi jirayna waxa ka mid ahaa "SHANTA DIIDOW DILAAC” iyo "AAN MAALMO HASHEENA MAANDEEQ” iyo kalmado kale oo xambaarsan micno kuwan la mid ah.
1. Reer Somaliland waxa ay 1-July u aqoonsanyihiin maalintii la khiyaamay ee jiritaankoodii god madaow lagu riday.
2. Reer Somalia waxa ay 1-july u aqoonsanyhiin maalintii midowga iyo guusha Soomaliya.
3. Reer Somaliland waxa ay 26-june u aqoonsanyihin maalintii xoriyadda ay ka qaateen Ingiriiska.
4. Reer Somalia waxa 26-june u aqoonsanyihiin maalintii gobolada waqooyi xoriyadooda qaateen
5. Reer Somaliland waxa ay 18-may u aqoonsanyihiin malintii ay dib u hanteen xoriyadii ka luntay 1-july 1960-kii.
6. Reer Somalia waxa ay 18-may u aqoonsanyihiin maalin koox yar oo caadifadaysani ay maamul gooni ah samaysatay.
1. Maxay tahay sababta runta ah ee reer Muqdisho ugu taamayso midnimo kale oo dhex marta Hargeysa, Muqdisho, lakiin Muqdisho miyay ka Soomaalinimo jeceshahay Hargeysa?
2. Maxay tahay sababta runta ah ee reer Hargeysi uga calool go’een midnimadii dhex martay Muqdisho.
3. fasiraada midnimo Soomaaliyeed oo la helo micneheedu ma waxa uu ku koobanyahay Hargeysa iyo Muqdisho ?
4. marka laga hadlayo midnimo Soomaaliyeed xaq ma u leeyihiin Jigjiga, Djibouti iyo Gaarisi ?
5. hadii Djibouti Dowlad Gaara noqotay Jigjigina iyo Gaarisina ay la shuraakoobeen dowlado kale maxaa ceeb ka dhigay in Hargeysina Dowlad Gaar ah noqoto ?
6. maxatay tahay sababta midnimo doon ee reer Muqdisho ku taamaan ee aan dhinacna u dhaafsanayn in mar labaad Hargeysi calanka iyo dowladnimada mar labaad ku casuunto Muqdisho ?
7. hadii reer Muqdisho run ka sheegayaan midnimada ay tan iyo 1991-kii ugu baaqayaan Hargeysa, maxaa loo waayay talaabo jawaab celin u ah naf hurkii Hargeysi samaysay 1960-kii iyo calankii ay ula baqooshay Muqdisho ?
8. ma dhabaa dooda sheegay in aan reer Somaliland xiligii xoriyad doonka Ingiriisku ka dilin tiro la mid ah tii ay ka sahayatay dowladii siyaad Barre xiligii ay horiyada bid u soo ceshanayeen ?
9. hadii aan xoriyadii dib loo hantiyay 19991-dii ka mudnayn kii 1960-kii maxay tahay sababta 18-may uga saamayn badatay 26-june ?
10. hadaan calanka sadex midab dadka reer Somaliland uga manfac badan kii buluuga ahaa ee 30-ka sanno ka taagnaa dalka maxay Hargeysada xiligan uga qurux badnaatay ugana nabad iyo horumar badatay Hargeysadii 1988-kii ?
11. Djibouti hadii ay gaar u taagantahay oo ay sidaa dan u aragtay maxay ugu garaabi wayday in Hargeysina sidaas oo kale yeesho ?
12. Mas’uul ka tirsan Dowlada Somalia hadii buuqasho ku tago Djibouti, Jigjiga ama Gaarisa waxa uu qirsanyahay in uu booqday dal ka mid ah dalalka jaarka waxana lagu soo dhaweeya mid ka mid ah astaanta calamada Keyna, Ethiopia ama Djibouti waxanu Muqdisho dib ugu laabtaa isaga oo safarkiisa la dhacsan, laakiin calanka ka taagan Hargeysa waxa uu u arkaa calan baadil ah oo Soomaali kala qaybin iyo googo u horseedaya ?
13. Ma odhan karnaa waxa Djibouti ku kalifay in ay dowlad gaar ah noqoto waxa ay ku quus qaadatay sad-bursigii siyaasiga ahaa ee ay reer Somaliland oo tiro ahaan ka badan Djibouti ay kala kulmeed israacii Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed.
14. Halgan badan oo xoriyad doon ah hadii Djibouti calankeeda ku guulaysatay oo 27-june sanad kasta calankeeda u debaal degto sidaana Soomaalida kale ku hambalyayso Muqdisho-na calankeeda u demaashaado sanad kasta marka lagaadho 1-july maxay tahay xaqiiqada Somaliland oo labadan dowladoodba calanka ka hor heshay xaflado deelqaaf iyo yasmo ku jirto loogu qabto Muqdisho ee loo yidhaa 26-june waa maalintii ay calanka heleen gobolada waqooyi, ileen xaqiiqada jirta ee diwaangashani waxa ay ahayd boqortooyadii Ingiriisku calanka waxa ay siisay dowlad maalmo kooban jirtay oo la odhan Jiray Jamhuuriyada Somaliland ee may siin wax gobolada waqooyi la yidhaa ?
15. Hadba cida talada Muqdisho qabataa waxa ay isticmaashaa weedho ay mudnaan lahayd in runta laga sheego oo xaqooda la mariyaa laakiin aan si dhab ah loo istimcaalin waxana ka mid ah weedhahaas " ummada Soomaaliyeed, calanka Soomaaliyeed, Ciida Soomaaliyeed, Ciidanka Xooga Soomaaliyeed” iyo weedho kale oo la hal maala iyada oo cida magacaa loogu yeedhayaa ay tahay oo dadka ku dhaqan dalka Somalia gaar ahaan dhulkii uu Talyaanigu gacanta ku hayay, oo aanay ku jirin Djibouti, Jigjiga Gaarisa iyo Hargeysi.
Waxan hadalkayga ku soo koobi lahaa bayd gabay uu lahaa gabayaagii caanbahay ee C/laahi Suldaan Timo Cade, oo ahaa "RAG CADAALAD WAAYAA SIDII CAWSHA KALA YAAC” hadii la waayay dal Soomaaliyeed oo wayn oo si cadaalad ah loo wadaago yaan la waayin shan dal oo Soomaaliyeed oo walaalo ah
1. Jamhuuriyadda Djibouti
2. Jamhuuriyadda Somaliland
3. Jamhuuriyadda Somalia
4. Iyo dowladaha Soomaalidu qaybta ka tahay ee Kenya iyo Ethiopia.